Antohomadinika : Mpanendaka amina taxi-brousse maromaro voasambotra - Midi Madagasikara
You Are Here: Home → Faits-Divers → 2019 → mai → 18 → Antohomadinika : Mpanendaka amina taxi-brousse maromaro voasambotra
Antohomadinika : Mpanendaka amina taxi-brousse maromaro voasambotra
Matetika dia tsy hialàna olon-dratsy eny amin’ireny fiantsonan’ny taxi-brousse ireny. Mazava ho azy fa ireo olona avy miala na handeha hiditra fiara no tena ataon’izy ireo lasibatra. Ny alarobia lasa teo dia mpanendaka dimy no voasambotra tetsy amin’ny fiantsonan’ny taxi-brousse-n’Ambatondrazaka tetsy Antohomadinika sy ny an’Ivato etsy Vasakaosy. Samy efa rain-dahiny amin’ny fanendahana avokoa ry zalahy ireto ary teo am-panaovana ny asa ratsiny no tra-tehaka.
Raha ireto tetsy Antohomadinika ireto dia efa voamarik’ireo mponina eny ny fisian-dry zalahy ireto ary efa nampandre avy hatrany pôlisin’ny kaomisarian’Isotry ireo nahita. Tamin’io fotoana io mantsy dia nihaodihaody teo amin’ny fiantsonan’ny fiara ireto roalahy, ary nahatily ny hazany manaraka. Teo am-panarahana ity farany mihitsy izy no voapaingotr’ireo pôlisy. Marihana hoy ny vaovao fa ny anakiray amin’izy ireo efa mpanendaka hikoizana hatramin’izay ary tafatsoaka teo am-pelan-tanan’ny pôlisy. Raha ilay namany iray kosa dia efa gadralava noho ity resaka fanendahana ity.
Fa ny tetsy Vasakaosy indray dia telolahy izy ireo no voasambotry ny pôlisy avy etsy Antaniavo. Ny fangalarana ny entan’ireo mpandeha indray no tena angadin’izy telo ireto. Ny sasany mody mampiakatra ilay entana eny ambony tafon’ny fiara, ny hafa indray efa mampidina. Tamin’io fotoana io dia tsy nanaiky ilay mpandeha, izay very entana iray gony fa nandeha nametraka fitoriana avy hatrany. Nosamborina avy hatrany ilay iray, mody nampiakatra entana. Izy indray avy eo no nanoro ireo namany sasany. Nosamborina ireto roalahy, izay gadralava ihany koa amin’ny resaka fangalarana. Mbola hita tany an-tranon’izy ireo moa ny entana marobe efa nalain’izy ireo, ka mbola tsy namidin’izy ireo. Efa natolotra ny Fampanoavana izy dimy lahy ireo ary nadoboka am-ponja vonjimaika.